03 May 2013 - Twi Online
Friday Sermon: God Consciousness and Unity of Allah - 03rd May 2013 - Ashanti Twi Translation.
ƐFIADA NYAMESƐM: Oforesuo Bosome da a ɛtͻ so 3, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon 3rd May 2013 – Ashanti Twi Translation)
NYANKOPƆN TEMA NE NYANKOPƆN BAAKO NO.
O! Mo nkurͻfoͻ a moagye adie! Monsuro Allah; na ͻkra biara ani nhwɛ deɛ ͻde redi n’anim ama ͻkyena no kwan; na monsuro Allah. Ampa ara sɛ Allah nim deɛ moyͻ no nyinaa na Ɔbɛbͻ mo ɛho amaneɛ.
Na mma monnyɛ te sɛ nkurͻfoͻ a wͻn werɛ firii Allah, enti Ɔmaa wͻn werɛ firii wͻn ankasa ho no. Weinom ne atuatefoͻ no (59:19-20).
Nyankopͻn ayͻ teneneeyͻ (Taqwa) nhyɛ anaa nyinasoͻ ama ͻgyidini biara. Kyɛfa ahodoͻ a ɛwͻ Kur’aan no mu kasafa mmra ahodoͻ a yɛbɛdi so na yɛabͻ ho ban na yɛasͻ mu yie. Kur’aan no afrɛ wͻn a wͻdi saa mmra yi so sɛ ateneneefoͻ anaasɛ ahoteefoͻ (Muttaqi) ɛna w’asan de kͻkͻbͻ nsɛm ama wͻn a wͻnndi so no.
Deɛn ne Nyamesuro? Ne nkyerɛkyerɛmu tiawa a ɛwͻ Kur’aan no mu ne sɛ, wobɛyɛ biribiara a Nyankopͻn ani bɛgye ho na w’ahunu sɛ Nyankopͻn yɛ baako na yɛmmfa obiara ntoto Ne ho na Ɔyͻ tumi nyinaa Wura. Nyamesuro ne sɛ wode Nyame asɛdeɛ bɛma No na wobɛma N’ani agye wo ho na wobɛyɛ N’abͻdeɛ nyinaa asɛdeɛ nso ama wͻn.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no atwerɛ sɛ; ɛda adi pefee sɛ, yɛyͻ Nyankopͻn asɛdeɛ ma No, na yɛdi N’apam nyinaa so wͻ gyidie mu, na yɛyͻ deɛ yɛbɛtumi na y’ano ka a yɛhunu te sɛ ani ne aso ne nsa na nan ne nansoa ne deɛ ɛka wei ho nyinaa, ne deɛ yɛnnhunu te sɛ adwene ne deɛ yɛdwene ho ne yɛn suban wͻ ne kwan pa so na yɛbͻ ho ban sɛ ɛnyɛ biribiara wͻ kwan bͻne so na yɛbɛbͻ yɛn kͻkͻ afiri bͻne ho na yɛde yɛn nuanom sunsum no awie pɛyͻ (Brahin-e-Ahmadiyya, Part V, RuhaniKhaza’in, vol. 21, pp. 209. Essence of Islam Vol. II p.348).
Wei ne gyinabrɛ a Bͻhyɛ Messiah (ANN) no akyerɛ mu akyerɛ yɛn, na wei na ͻrehwehwɛ afiri yɛn hͻ. Efiada ahodoͻ a atwamu no, Hadhrat Khalifatul Masih twee y’adwene baa so wͻ kwan a yɛbɛfa so ayɛ yɛn asɛdeɛ ne apam a gyidie wͻ mu wͻ berɛ a na ͻreka de kyerɛ wͻn a wͻkuta diberɛ wͻ Jama’at no mu no. Nnɛ da yi, w’akyerɛkyerɛ nsɛmpͻ no mu yie. Ahmadiyyafoͻ tiri ayɛ yie sɛ wͻn a wͻyɛ agyidifoͻ nnɛ mmerɛ yi mu no, wͻn na deɛ wͻbɛyɛ biara no, ɛma wͻn bɛn Nyame yie. Ɛyɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) no adom a ͻde agu yɛn so ɛne sɛ, ͻkyerɛ yɛn kwan a ɛdi mu a ɛtwe yɛn bɛn Nyankopͻn. Ɛwom sɛ, nipa biara wͻ ahoteɛ gyinabrɛ soronko, aniso, adehunu, deɛ ͻdwene sifa ne deɛ ɛkeka ho. Wei nti na yɛahyɛ sɛ obiara mmͻ mmͻden sɛ ͻbɛyɛ deɛ n’ahoͻden bɛtumi biara sɛ ͻbɛyɛ bͻhyɛ a w’ahyɛ Nyankopͻn no. Sɛ ogyidini biara sͻ hwɛ a, ͻbɛyɛ obi a ͻsuro Nyame.
Yɛn nsa, yɛn nan, y’aso ne y’ani a yɛde yɛ ade pa no, yɛahyɛ no na ɛsan yɛ nhyɛ sɛ ɛbɛtwe ne ho afiri neɛma a y’abra ho. Y’ano a yɛhunu no, nnyɛ sɛ yɛde bɛyɛ nipa asɛdeɛ ama no nkoa. Yɛ wͻ neɛma pii wͻ hͻ a ɛne ebinom nni nkutaho korͻ a saa neɛma yi nnyɛ mfasoͻ anaa ͻhaw mma nnipa biara. Sɛ yɛdwene nsɛm yi ho a, yɛhunu sɛ ɛde mfasoͻ anaa ͻhaw ba yɛn so ɛnam yɛn suban ahodoͻ nti. Enti Nyankopͻn ama yɛn ho kwan anaa W’asi yɛn ano kwan. Sɛ yɛyͻ neyeɛ a Nyame asi ano kwan a, nipa bue ban anaa ɛhyeɛ ne mpɛnpɛnsoͻ a Nyankopͻn ahyɛ no anon a w’asan abu so. Sɛ y’annyɛ deɛ Nyame ahyɛ yɛn a, nipa twe ne ho firi deɛ Nyankopͻn ahyɛ yɛn sɛ yɛn yɛ ho. Eno nti, sɛ yɛyͻ biribi de tia Nyankopͻn mmra anaa sɛ y’annyɛ deɛ Nyankopͻn ahyɛ yɛn a, ɛma nipa bu Nyankopͻn apɛdeɛ no so na ɛsan ma yɛtwe yɛn ho firi Nyamesuro ho. Mmerɛ dodoͻ a yɛretwe yɛn ho firi Nyamesuro ho no, saa mmerɛ dodoͻ no ara na nipa tͻ Ɔbonsam amena mu. Wei nti na Bͻhyɛ Messiah (ANN) no aka sɛ mma ogyidini ntwe ne ho mfiri deɛ ɛnnyɛ nkoa ho mmom ɛwͻ sɛ ͻhwɛ Ɔbonsam ndaadaa nso.
Ahwɛyie wei na ɛgye yɛn firi Ɔbonsam ndaadaa a ͻtaataa yɛn kwan ahodoͻ pii so. Yɛ wͻ abɛfo mfidie ne neɛma a ɛbɛtumi ama yɛn ͻhaw, san sɛ yɛde bɛdi dwuma ama mfasoͻ aba so no, mmerɛ bi wͻ hͻ a, yɛde di dwuma a ɛde ͻhaw new neɛma a Ɔbonsam ahyehyɛ bɛba. Ɛtwe nipa firi ne Nyamesuro ho na ɛsan wͻ nsunswansoͻ bͻne wͻ yɛn abrabͻ so. Wͻn a wͻnnsom Nyame no dwene sɛ ɛyɛ wͻn nko asɛm; deɛn na ɛsie ma obi a ͻto ‘kyakya’ anaa ͻhwɛ ͻbaa ne barima nda mu nkutahodie wͻ abɛfo mfidie “internet ne TV” so. Anaa sɛ yɛ wͻ neyeɛ bͻne bi a nipa no bi yͻ. Wͻn dwene sɛ obiara nni hwee yɛ wͻ wei ho firi sɛ ɛmfa ͻhaw ɛmma nipa. Kwan biara so no, neɛma a ɛne Nyankopͻn akwan bͻ abira no twe nipa firi Nyamesom ho koraa, ɛtwe nipa firi wͻn asɛdeɛ a ɛwͻ sɛ wɛde ma Nyankopͻn ne nkurͻfoͻ ho. Nsanom, kyakyatoͻ, sini bͻne a yɛhwɛ no wͻ abɛfo mfidie so, ayͻnko bͻne a ɛwͻ kuro yi mu na ɛma abusua ntam teteɛ. Wͻ san de mmabunu nso fa kwan bͻne so, mpo wͻnnkyerɛ wͻn kwan pa a wͻbɛgye adi sɛ Nyankopͻn te ase na deɛ awie wͻn ara ne sɛ wͻbɛyɛ ͻhaw ne ateetee ma ͻman no. Nyankopͻn aka sɛ, obiara de n’ano, n’ahoͻden ne nensusueɛ yɛ deɛ Nyankopͻn ahyɛ yɛn sɛ yɛn yͻ wͻ ne kwan pa so a, ɛno na ɛde Nyamesuro ba.
Kyɛfa a m’akenkan no wͻ mfitiaseɛ no mu no, Nyankopͻn aka sɛ, sɛ wo gyidi wie a, suro Nyame. Mma awiase yi mu ahotͻ ne afɛfɛdeɛ nnyɛ yɛn biribiara. Mmom, ɛwͻ sɛ yɛhwɛ deɛ yɛ’ayɛ ama Nyame ani asͻ ɛfiri sɛ wei ne neyeɛ a ɛho mmba mfasoͻ wͻ yɛn wuo akyi wͻ berɛ a deɛ ɛtwetwe yɛn, ahotͻ ne anigyeɛ a ɛwͻ asaase yi so bɛka asaase yi so ha ara. Ɛwɛ sɛ yɛda yɛn ho so; bͻne nhini a ɛwͻ nipa mu no ma nipa mmfa biribiara ho na ɛsan ma nipa nnkae ne Nyankopͻn. Sɛ obi pɛ nhyira a ɛwͻ sɛ ͻfa Nyame kwan so. Kyɛfa a adi kan no wͻ kyɛfa mienu a m’akenkan no wͻ nhyɛaseɛ ka kyɛfa ahodoͻ a yɛkan no wͻ Nikah ase. Ɛtwe yɛn adwene gyina yɛn daakye abrabͻ mu ne yɛn asefoͻ sɛdeɛ ɛbɛma wͻn bɛyɛ ahoteefoͻ ɛfiri sɛ nkoraa a wͻyɛ ahoteefoͻ na Nyankopͻn ani gye wͻn ho. Ahoteefoͻ nkwadaa nnyɛ afɛfɛdeɛ nkoa na wͻsan pagya wͻn awofoͻ gyinabrɛ wͻ wͻn wuo akyi wͻ berɛ a wͻbͻ mpaeɛ ma wͻn. Nyankopͻn aka no ha sɛ, ɛwͻ sɛ yɛkae sɛ, mmerɛ so sɛ yɛbɛware a, afɛfɛdeɛ, ahotͻ ne anigyeɛ a ɛwͻ asaase yi so no, yɛde to y’akyi. Aware ne awiase mu nkabom yɛ anigyeɛ kakra bi. Anigyeɛ mapa ne sɛ wobɛhwehwɛ Nyankopͻn anigyeɛ a yɛnya no wͻ asaase yi so ne mu nuaba nyinaa bi wͻ yɛn wuo akyi a yɛde bɛgye y’ani. Mmerɛ pii no, Nyankopͻn kasa fa kwan a yɛbɛsuro No na y’ayͻ neɛma pa a ɛbɛba mfasoͻ ama yɛn wͻ asaase yi so ha ne yɛn wuo akyi na yɛakae sɛ Ɔno nko na Ɔnim biribiara. Neɛma nketenkete a yɛyͻ nyinaa no yɛbɛbu ho atɛn. neɛma pii na ɛwͻ sɛ yɛhwɛ no yie.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa no wͻ nhyiamu bi ase sɛ, wͻ Islam mu, abrabͻ kann no hia ma owuo, a ɛyɛ ɛnteaseɛ na obiara a ͻgye to mu no ͻno na ͻnya nkwa. Hadith ɛka sɛ, nipa hunu awiase apɛdeɛ ne anigyeɛ sɛ ɛsoro ahenman mu, ɛwͻ mu sɛ ɛte sɛ bonsam gya mu. Nkurͻfoͻ a wͻyɛ ateneneefoͻ no gye amaneɛ wͻ Nyankopͻn kwan so to mu na ͻno nkoara ɛyɛ ͻsoro ahenman mu. Akyingyeɛ biara nni ho sɛ ewiase wei yɛ mmerɛ kakraabi na y’awo obiara sɛ wͻn wu. Aberɛ bi ba a namfoͻ nyinaa wͻn a wͻbɛn yɛn ne wͻn a yɛdͻ wͻn no mu bɛtete. Anigyeɛ biara a ɛnnyɛ ne ahonyadeɛ a yɛfa no sɛ anigyeɛ, ɛnoͻma a ɛyɛ nwono. Yiedie ne anigyeɛ a adi mu no, yɛnntumi nnya kyɛnsɛ Taqwa (Nyamesuro) ka ho. Na sɛ yɛbɛfa Taqwa no te sɛ yɛrenom adubͻne bi afiri kuruwa mu. Onyankopͻn ayɛ nhyehyeɛ biara a ɛbɛma ateneneefoͻ no anigyeɛ …………..(65: 3-4). Ɛne sɛ nyinasoͻ a ɛma obi yiedie no ne Taqwa. Ampaara sɛ, sɛ wobɛnya Taqwa no, ɛnni kwan sɛ yɛpɛ tebeabi. Sɛ yɛtumi nya Taqwa a, yɛnya adeɛ biara a yɛbusa firi Nyankopͻn hͻ. Onyankopͻn Kokroko No yɛ Ahummͻbrͻ ne Ayamyie, nya Nyamesuro na Ɔbɛma wo adeɛ biara a wo pɛ (Malfuzat, Vol. V, pp. 106 – 107).
Bͻhyɛ Messiah (ANN) nso kaa sɛ, Taqwa kwan no so fa yɛ den, ne deɛ ͻbɛtumi adi ano no yɛ deɛ wͻde ne ho nyinaa atwere Nyame na ͻdi ne mmra so na ͻyͻ deɛ Onyankopͻn pɛ na ͻnni deɛ ͻno ankasa pɛ akyi. Biribiara nni hͻ a ɛbɛfiri mu aba sɛ yɛyɛ ho te sɛ yɛreyͻ na sɛ y’annyɛ a, nti deɛ ɛhia ne Onyankopͻn adom. Wei sei bɛtumi aba mu sɛ yɛyere yɛn ho bͻ mpaeɛ a. Onyankopͻn ahyɛ yɛn sɛ yɛmmͻ mpaeɛ na yɛn nyere yɛn ho (Malfuzat, Vol. VI, p. 227).
Ampaara sɛ, sɛ yɛnya Nyamesuro a, yɛnya adom firi Onyankopͻn hͻ nti ɛwͻ sɛ yɛdwene ho hunu sɛ yɛredi bͻhyɛ a yɛyͻeɛno so sɛ y’anigye gyidie no ho kyɛn awiase afɛɛfɛdeɛ no ho a ne bͻhyɛ no sɛ yɛbɛnante wͻ Taqwa kwan so na yɛbedi y’asɛm ne yɛn suban ho nni. Bͻhyɛ Messiah (ANN) kͻͻ so kaa sɛ, obiara ho nntumi nnte kyɛnsɛ deɛ Nyankopͻn ate ne ho. Sɛ ͻkra biara de ne ho batu Onyankopͻn pano anim wͻ ahobvraseɛ mu ne merɛ yͻ mu a, Onyankopͻn bɛgye saa nipa no mpaebͻ na saa nipa no abɛyͻ ͻteneneeni na w’abɛnya nimdeɛ ne nteaseɛ a ɛwͻ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no ɛsom no ho. Annyɛ saa a, adeɛ biara a wͻbɛka afa ɛsom no ho ne n’asͻreyͻ ne deɛ ɛkeka ho no,yɛ adeɛ bi a wͻdi akyire wͻ sɛ wͻretiatia ne nananom anamon mu a wͻnni mfasoͻ anaa sɛ sunsum mu adeɛ biara (Malfuzat, Vol. VI, p. 228).
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa sɛ, nya Nyamesuro ɛfiri sɛ Nyamesuro biara no, nhyira na edi akyira, na ateneneefoͻ no wͻbͻ wͻn ho ban firi amaneɛ mu wͻ ewiase yi mu. Wͻ Onyankopͻn adom mu no, yɛhunu nhyhira bebiree a ɛfiri Nyankopͻn hͻ wͻ yɛn ahoͻden mu sɛ Jama’at na yɛsan tu mpͻn nso. Na yɛsan di adanseɛ wͻ ɛkwan soronko a Onyankopͻn de Jama’at yin am so na saa ara na Ɔyi yɛn firi y’atamfo no nsamu wͻ aberɛ a ɛmu yɛ den mu. Nipa bebiree wͻ Jama’at no mu a, wͻnam Nyamesuro kwan so na wͻnya Onyankopͻn anigyeɛ. Nti ɛwͻ sɛ yɛyere yɛn ho sɛ, sɛ yɛde yɛn sa hyɛ Bai’at ase wie a, yɛbɛduru Nyamesuro mpɛmpɛnsoͻ a nokorɛ Muslimfoͻ no nya ne deɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) no hwehwɛ firi yɛn hͻ. Yɛn kae Nyame aberɛ biara. Ampaara sɛ Onyankopͻn ka sɛ Ɔmmͻ ka sɛ yɛwerɛ firi No a, na ampaara sɛ mpaeɛ no yɛn ara na ɛbɛha yɛn. Wͻnom a wͻwerɛ firi Nyankopͻn no bɛhunu no dakoro. Wͻn abrabͻ no ma wͻn suban ne wͻn sunsum mu no te kͻ fͻm; wͻnom pɛ ewiase no kyɛn gyidie. Ɛdeɛn tebea na wͻnom bɛkͻ mu wͻ saa ewiase wei awieɛ no. Onyankopͻn nkoara na Ɔnim. Na nso wͻn a wͻde wͻn ho nyinaa ahyɛ ewiase no mu no, hwere wͻn asomdwie wͻ saa ewiase yi mu.
Onyankopͻn aka sɛ, sɛ wok a sɛ wogyidi na w’annyere woho sɛ wobɛfa Nyanesuro kwan so a, wonnyɛ Onyankopͻn asɛdeɛ mma No, ne nipa nso asɛdeɛ na nyinasoͻ ne sɛ wonni gyidie mapa wͻ Onyankopͻn mu. Wͻ saa gyinaberɛ wei sɛ y’annyere yɛn ho sɛ yɛbɛsesa wͻ saa ewiase wei ɛmfa ho a, ɛnnyɛ ɛno nkoara. Saa onipa wei, yɛbɛfa no sɛ ͻyɛ asoͻdenfoͻ. Ɛha nom (59:20) Fasiq kyerɛ obi a ͻhyɛbͻ sɛ ͻbɛdi Sharia mmra nyinaa so nanso ͻbu bi so anaasɛ ne nyinaa. Kyɛfa foforͻ a ɛwͻ Kur’aan no mu no, kyerɛ yɛn sɛ obi a ͻnnyɛ naasefoͻ mma Onyankopͻn nhyira no, nnka wͻn a wͻbu adeɛ no ho na yɛde no ka Fasiqfoͻ no ho ne obi a ͻwͻ suban bͻne. Aberɛ a y’ayɛ Bai’at na y’ayi gyidie agya ewiase noͻma no ho, ɛneɛ aberɛ biara ɛnni kwan sɛ yɛbu Onyankopͻn mmra no animtia. Ɛyɛ Onyankopͻn adom kɛseɛ wͻ Ahmadiyyafoͻ so sɛ W’ama yɛn Ne nhyira bebiree, ɛne Bͻhyɛ Messiah (ANN) no nhyira no w’afa Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no adwuma.
Ampaara sɛ, nkͻmhyɛ yɛ nhyira kɛseɛ wͻ Onyankopͻn nhyira nyinaa mu a yɛbɛtumi ahunu adeɛ biara a ɛbͻ abira wͻ Islam mu no yɛbɛhunu. Wͻnom bͻ mpaeɛ sɛ wͻbɛnya na afei wͻsan ɛpo. Yɛtiri ayɛ yie sɛ y’agye saa nhyira wei ato mu na yɛde y’aka wͻn a wͻbɛnya kyɛfa afiri saa nhyira wei mu no. Wei nyinaa bɛtumi aba mu wͻ aberɛ a yɛbɛsusu asɛdeɛ ne deɛ Bͻhyɛ Messiah (ANN) no hia ɛfiri yɛn hͻ no. Annyɛ saa a, yɛbɛka wͻn a w’apo no ho na y’atwetwe Onyankopͻn abufuo aba yɛn so. Bͻhyɛ Messiah (ANN) no baa sɛ ͻbɛtoa ne wura Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no adwuma so, sɛ ͻde Onyankopͻn Koroyɛ no bɛba na w’akyerɛ sɛ Ɔtease. Yɛbɛnya Taqwa paa no wͻ aberɛ a yɛwͻ gyidie mapa wͻ Onyankopͻn Koroyɛ mu.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no twerɛɛ sɛ, Onyankopͻn Koroyɛ (Tawheed) no nkyerɛ deɛ wͻbɛka sɛ Laa Ilaaha Illallah wͻ aberɛ koro a wͻwͻ abosom apem wͻ n’akoma mu. Ampaara sɛ, obiara a wͻde ͻno ankasa n’adwuma biara bɛma naadaa, anaa sɛ wͻbɛdwene sɛ biibi ho hia te sɛ Onyankopͻn, anaasɛ ͻde ne werɛ hyɛ obi mu te sɛ deɛ ɛwͻ sɛ ͻde ne ho to Nyankopͻn so no, anaa sɛ ͻma ͻno ankasa ne ho mfasoͻ a ɛwͻ sɛ ͻde ma Nyankopͻn no, wͻ Onyankopͻn anim no, ͻyɛ ͻbosom som ni. Abosom nnyɛ deɛ yɛde sikakͻkͻͻ anaasɛ ɛboͻ bi ayɛ a yɛde yɛwerɛ hyɛ mu. Na mmom, ɛyɛ adeɛ biara, kasa anaa suban a yɛma no mfasodeɛ a ɛsɛsɛ yɛde ma Onaynkopͻn no, yɛ bosom wͻ Nyankopͻn anim (Siraj-ud-Din ‘Isa’ike Char SawalonkaJawab, RuhaniKhaza’in, Vol. 12, pp. 349).
Onyankopͻn Koroyɛ paa a ɛdi mu ne deɛ yɛbɛyͻ deɛ Onyankopͻn ɛhia firi yɛn hͻ na ɛno so na nkwagyeɛ ɛgyina, na sɛ yɛbɛgye adi sɛ Onyankopͻn wͻ mu no ɛho te firi mmata ho biara, sɛ ɛyɛ bosom anaasɛ nnipa anaasɛ bome anaasɛ nsonoma anaasɛ obi apɛdeɛ, na yɛbɛkata so. Obi wͻ tumi ɛka Onyankopͻn ho, anaasɛ yɛbɛgyue ato mu sɛ obi bɛtena hͻ daa, anaasɛ yɛbɛhunu sɛ obi bɛdom yɛn animonyam anaasɛ ͻbɛgu yɛn anim ase, anaasɛ yɛbɛhunu sɛ obi yɛ ͻboafoͻ na yɛde yɛdͻ nyinaa bɛma no na y’asom no.
Koroyɛ biara ntumi nwie pɛyͻ sɛ yɛanfa saa agyinasoͻ miɛnsa yi annyɛ adwuma a. Edi kan, Ɔteasefoͻ baako wͻ hͻ, ɛno ne sɛ, yɛbɛdwene sɛ Oni hͻ a, ewiase yin so nni hͻ. Ɛtͻ so mienu, Ɔyɛ baako pɛ na asomneɛ nkaeɛ nyinara yɛ Ne nsa ano nwuma. Ɛtͻ so miɛnsa, Ɔdͻ koroyɛ, nokorɛdie ne atuhoama; ɛno ne sɛ, mma yɛnnfa biribiara mmata Onyankopͻn ho nsom na mmom yɛbɛdͻ na y’asom Onyankopͻn nkoara (Siraj-ud-Din ‘Isa’ike Char SawalonkaJawab, RuhaniKhaza’in, Vol. 12, pp. 349-350. Essence of Islam, Vol. I. pp. 169 – 170).
Ɛfa Taqwa ho no, Bͻhyɛ Messiah (ANN) no aka sɛ; Taqwa mudie ne sɛ, nipa honamdua no sesa na wei nkoara ne Tawheed (Nyame Koroyɛ). Sɛ yɛbɛdͻ Onyankopͻn akyɛn biribiara ne Taqwa na wei nso kyerɛ Tawheed. Onyankopͻn moa yɛn na yɛnuru saa gyinabrɛ yi.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ, ͻretu kwan nti ͻserɛ mpaebͻ sɛdeɛ ɛbɛyͻ a akwantu no bɛwie nkunimdie.
Translated by: 1. Abdul Hakeem Oduro Sahib
2. Ali Majeed Sahib
3. Ishaque Opoku Muhammad Sahib